Usoro na Ọnọdụ | Ndagharị na-agba aja aja
ỤLỌ NKE MBỤ & ỤLỌ
Ọnụ ọgụgụ niile dị na Indian Rupee.
GST 5% dabara na ọnụego ụgwọ niile.
A na-arịọ ndị ọbịa ka ha nweta ụgbọala ahụ n'onwe ha tupu iji ya eme ihe. A na-acho ha ka ha debe ihe ha nwere n'onwe ha. Anyị anaghị eburu ibu ọrụ maka ọnwụ.
Ọ bụrụ na ụdị ụgbọ ala ahụ dị ka ihe ọ bụla chọrọ maka ihe ụfọdụ na-atụghị anya ha, a ga-enye ndị ọbịa ahụ ụdị ụgbọ ala ahụ.
Ịhụ ọhụụ ga-abụ dịka ọ bụla na-eme njem n'okporo ụzọ moto.
A gaghị amanye onye ọkwọ ụgbọ ala ịkwọ ụgbọala na ọsọ ọsọ karịa iwu dị n'okpuru Iwu Indian Motor Vehicle Act. A na-achọ ka onye ọ bụla ghara ịbịa njem abalị.
Maka nlekọta ka mma nke ndị ọbịa, Sand Pebbles Tours ga-eme ndokwa ịkwụ ụgwọ ụgwọ ọrụ ụgwọ ụgbọ ala na ụgwọ ọrụ na obodo Inter-State na-akwụ ụgwọ nke onye ọbịa ga-akwụghachi ụgwọ maka mmepụta nke Receipts na njedebe nke ọrụ.
N'ime ọrụ mpaghara, a ga-akwụ ụgwọ Alkafeur N'abalị n'etiti 22.00 Hrs na 06.00 Hrs. A ga-akwụ ụgwọ ndị ọzọ niile a ga-akwụ ya ụgwọ n'oge ọ na-eji ya.
Mgbe ị na-anya ụgbọala n'okporo ụzọ Ghat, a ga-akwụsị oyi ikuku.
Iji zere okporo ụzọ na jam na ọnọdụ ndị ọzọ na-atụghị anya ya nke nwere ike ime ka oge na-aga, a ga-enye ọkwa zuru ezu maka inyefe ụgbọelu / okporo ụzọ.
A chọrọ iwepụta akwụkwọ akwụkwọ iji banye n'aka onye ọrụ iji gosipụta ojiji ahụ. Enweghi mkpesa nke ozo.
A na-arịọ ndị ọbịa ka ha nyochaa àgwà anyị na arụmọrụ anyị ma mejupụta ụdị "Ntughachi" nke Onye Chauffeur ga-enye ha, Nke a ga-enyere anyị aka ijere gị ozi ọma.
A ga-akwụ ụgwọ ndị a na Client / Guest ma ọ bụrụ na edeghị ya ede. Ụdị ịkwụ ụgwọ a ghaghị ịdọ aka ná ntị n'ụzọ doro anya n'oge ntinye akwụkwọ.
A ga-ewepụta ego na nkwụsị izu abụọ. Pebbles Sand na-enye ohere kachasị ụbọchị 15 site n'aka ụbọchị natara Bill na e mezuru nkwekọrịta. Maka mgbakwunye nke Time Sand Pebbles nwere ike ịrịọ ka edere ederede ma ọ dịkarịa ala n'ime awa 48 nke natara ụgwọ.
Tarifụ a dị n'elu dị n'okpuru ntụrụndụ na-adabere na ya ma ọ bụrụ na ị na-akwụ ụgwọ ego nke mmanụ ụgbọala ma ọ bụ Govt. Ụdị ụtụ.
Ịdị elu nke ụgbọ ala na Bhubaneswar bụ kpamkpam na nghọta nke Sand Pebbles.
Enwere ike ịkwụ ụgwọ site na ego ma ọ bụ site na a / c payee Check / DD / PO maka mmasị "Sand Pebbles Tour 'n' Njem (I) Pvt Ltd."Ụgwọ Kaadị / RTGS ma ọ bụ NEFT nwekwara ike ịkwụ ụgwọ ụgwọ (Ịkwụ ụgwọ site na kaadị akwụmụgwọ ga-akwụ 3% extra) ụgwọ.
Maka ndozi site na kaadị akwụmụgwọ, Kaadị Nsịrị na Ụbọchị Mmebi ga-ezipụ ozi / Faxed n'oge Ntinye akwụkwọ. Ọ bụrụ na emeghị ka ohere ahụ nwee nkwanye ùgwù, onye na-ede akwụkwọ Client / Guest must replenish by cash.
Ọ bụrụ na a kwụrụ ụgwọ site n'aka RTGS / NEFT, a ghaghị ịkọọrọ Sand Pebbles banyere nkọwa.
N'ihe banyere nkwụnye ego nke Rs.25000.- ma ọ bụ karịa, a ga-enye akwụkwọ nke PAN kaadị nke onye ahịa / onye ọbịa.
Mkpesa niile na-achịkwa ikike iwu Bhubaneswar nanị.